DAAWO: Somaliland miyaa lagala wareegay gobalka Sanaag, Ciidamadii u dambeeyey miyey ahaayeen kuwii shalay Is dhiibay?
BADHAN(P-TIMES) – Shalay ciidamo katirsanaa kuwa Somaliland ee gobalka Sanaag, gaar ahaana Guutada 93aad ayaa ugu dambeyntii ku biiray Puntland, waxayna kusugnaayeen deegaanka Ceelbuh ee gobalkaas oo ay horey Somaliland gacanta ugu heysay.
Talaabadas dad badan ayaa u arka in ay tahay in gobalkii Sanaag, gaar ahaana qeybta Barriga oo dhan ay ka baxday gacanta Somaliland oo ay gashay Puntland, sidaas oo kalena qeybo kale oo buuraleyda ah ay gacanta ku hayaan jabhad hubeysan oo uu hogaaminayo Sarkaal katirsanaa ciidamada Somaliland oo ka goostay.
Dadka la socda hardanka gobalada Sool & Sanaag ee u dhaxeeya maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa rumeysan in joogitaankii Somaliland ee Sanaag-Barri uu hadda noqday mid gabaabsi ah, maadaama looga awood batay maamulka Hargeysa.
Xukuumadda Puntland, ayaa u aragta fursad weyn oo siyaasadeed in ay gabi ahaanba ciidamada ama cududa ugu xooga badan oo kasoo jeeda gobalka Sanaag ay hadda gacanteeda ku jiraan, waxayna dhawaan bilowday dalacsiinta saraakiishii kasoo goosatay Somaliland.
Dadka qaarkood waxay rumeysan yihiin in ciidamadan faraha badan ee soo galay Puntland, haddii aan loo helin jiheyn, mushaar joogto iyo tababarada ay u baahan yihiinba ay kadhigan tahay in ay fashil tahay guulaha sida nabadgalyada ah ay ku heshay Puntland.
Puntland & Somaliland, waxay isku hayaan gobalada Sool, Sanaag iyo Cayn, marar badan ayay ku dagaalameen, xiisadihii u dambeeyey ayaa ahaa deegaanka Yube oo ay joogaan wali ciidamo katirsan Somaliland, kuwaas oo qabsaday halkaas, iyagoo doonayay in ay u gudbaan magaalada Badhan, laakiin iska caabin ayay kala kulmeen dhanka beesha gobalkaas.
XOG: Taliyaha ciidamada Lugta ee DFS oo ciidamo hubeysan ka daabushay Garoowe, lana aaday Muqdisho.
Beesha Warsangali ee degta barriga gobalka Sanaag ayay lumisay Somaliland, ka dib markii ay ceyrisay wasiiraddii gobaladaas kasoo jeeday ee kujiray Xukuumadda Hargeysa, sidaas oo kalena talaabadaas ayaa loo arkayay dharbaaxo siyaasadeed oo ku soo wajahan Somaliland, ugu dambeyn-na ku dhacday.